Ikhaya STARS E-EUROPE I-Aymeric Laporte Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba ephelele yeBhola yeBhola eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Amabutho". Indaba yethu yezingane zase-Aymeric Laporte kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF-Pitch Facts ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe okuzivikela, kodwa bambalwa abheka i-Aymeric Laporte Bio ethutha kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
I-Aymeric Laporte Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
I-Aymeric Laporte yazalwa ngosuku lwe-27th lukaMeyi 1994 e-Agen, eFrance. Wazalelwa ubaba odlala i-rugby nomama odlala ibhola.
ULaporte waqala ukudlala ibhola kanye nomgogodla eneminyaka emihlanu futhi waqala ukuthuthukiswa kwakhe e-SU Agen yentsha yebhola lebhola lezinyawo. Ku-2009 wamenywa ukuba ayojoyina i-Athletic Bilbao ngemuva kokuhlolwa, okwenza ingxabano ukuthi ngabe ukusayina kwakhe kuhambisana nemigomo yenqubomgomo yabo. Ngisho nangalesi sikhathi, uthathwa njengomncane kakhulu ukuba angene ngaphandle kweFrance. Lokhu kwamenza wachitha inkathi nge-Aviron Bayonnais FC.
Wabe esejoyine i-Athletic Bilbao e-2010 eneminyaka engu-16, waba ngumdlali wesibili waseFrance-ngemuva kokuthi uBixente Lizarazu - ukudlala kubo, eqhubeka nokwenza ukubonakala kwe-200 eqenjini futhi abe ngumqambi ongenakuphikiswa. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
I-Aymeric Laporte Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
I-Aymeric Laporte njengamanje idinga ubuhle beSpain, uSara Botello ongudansa ngokusebenza.
Bobabili bahlangana ngesikhathi sakhe sase-Athletic Bilbao. KwakunguSara nomndeni wakhe abasiza u-Aymeric Laporte ukuba ahlale eSpain. Ngezansi uSara Botello wenza lokho azi ukuthi angakwenza kanjani okuhle kakhulu.
Isikhathi sekhwalithi yinoma yisiphi isikhathi u-Aymeric noSara abachitha ndawonye abenza bazizwe besondelene, bexhunyiwe futhi banothando kakhulu.
Ubuhlobo babo buyingxenye abahlanganyela ngayo injabulo hhayi nje ekutholeni. Kuyinto nje kuphela isikhathi ngaphambi kokubopha amafindo.
I-Aymeric Laporte Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
I-Aymeric Laporte ekuqaleni yayivela emndenini wokuqala weFrance ngaphambi kokuba ibhola likhokhwe.
Abazali bakhe, uMnu noMnuz Laporte babeyizici ezibonakalayo ezemidlalo. Njengoba kushiwo ngaphambili, umama wakhe wayengumdlali webhola lezinyawo ngenkathi ubaba wakhe eyinkanyezi yombhoxo. Ngisho nodadewabo kanye nomalume wakhe kuphela badlala ibhola lezinyawo iminyaka eminingana. U-Aymeric ngokwakhe uqale njengomdlali ngaphambi kokuguqula umvikeli.
I-Aymeric Laporte Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
I-Aymeric Laporte inemfanelo elandelayo yobuntu bakhe.
Amandla e-Aymeric Laporte: Ungumuntu omnene, onothando, onolukuluku, okwazi ukuvumelanisa nezimo, okwazi ukufunda ngokushesha futhi othanda ukushintshanisa imibono.
Ubuthakathaka base-Aymeric Laporte: Wayengethusa ngokungadingekile. Ngaphezu kwalokho, ukungavumelani, ukunganaki lapho eba engazinzile.
Imuphi i-Aymeric Laporte ethanda: Umculo, amabhuku, omagazini, uxoxa nabantu abangaba nguyena, uhambo oluncane oluzungeza idolobha
Iyiphi i-Aymeric Laporte engathandi: Ukuba yedwa, ukuvalelwa, ukuphindaphinda nokujwayele.
Ngamafuphi, i-Aymeric iyathandana, ikhulumisana futhi isilungele ukuzijabulisa, ngokuthambekela kokuthola ngokungathí sina, ukucabangela nokuphumula.
I-Aymeric Laporte Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Idol yakhe
ULaporte wadlala njengomdlali oshayisayo ekuqaleni komsebenzi wakhe futhi waba ngumdlali omkhulu we-Arsenal neFrance phambili iWiltord kanti le ncwadi yayiseBordeaux.
"Ngiqale njengomdlali, ngiqede izikhathi eziyisishiyagalolunye njengomdlali ophakeme kunabo bonke emidlalweni," ULaporte uthe. "Nginezithombe eziningana kodwa azizona izinkanyezi. Ngesikhathi ngisemncane kakhulu, ngangikuthanda kakhulu umdlali odlala eGirondins de Bordeaux, eyayiyiqembu engalixhasa. Bekuyi USylvain Wiltord. Nganginakho Wiltord's ijezi. Ngangithanda futhi [owayengumqhubi wasePutukezi nomdlali waseBordeaux owayenguPreleaux]. Ngigubha imigomo yokulinganisa njengoba nje enza. "
I-Aymeric Laporte Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Umlando Wokulimala
Umdlali oqinile, ode futhi onamandla wokudlala ibhola uye waqhubeka nokulimala okuncane kuze kube manje emsebenzini wakhe.
NgoMeyi 2013, uLaporte wahlinzwa ekudleni ukuze avuselele i-meniscus ephukile, ebese ehlukunyezwe ngaphambili emadolweni akhe angakwesokudla.
Ukubuyiselwa okukhulu kunokwenzeka ngo-March 2016, lapho ehlushwa i-fibula ephukile kanye ne-ankle kwesokudla ngenkathi edlala i-France Under-21s. Ukulimala kwamenqamula ngaphandle kwenkathi futhi kwashiya ingatholakali ukukhethwa kwe-Euro 2016.
I-Aymeric Laporte Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ukulinda uFrance
I-Laporte idlale kuyo yonke insizwa yentsha yeFrance, ibuye ilandelele uhlangothi lwe-U21, kodwa ingakenzi i-début yakhe neqembu eliphakeme.
ISpain ibilokhu ifuna iLaporte ukuba ibe umdlali ozoziwayo ngaphambi kokuba iFrance imemezele ngoSeptemba 2016 ngamagoli amabili eNdebe yoMhlaba. Akazange afake umdlalo kodwa usememezele ukuthi uzimisele ukudlala i-Les Bleus.
"Ngilinde isikhathi eside," esho ngaleso sikhathi. "Kuyinto engiyiphuphile. Ngiyazi ukuthi kufanele ngiqhubeke ngiphikelela futhi ngithobekile. Ungasho ukuthi ithimba likazwelonke laseSpain lafuna amasevisi ami. Angikaze ngicabange ukuthi ngizodlala iSpain. Ngihlale ngicacile futhi ngihlale ngithi isifiso sami sokuqala kwakuzodlala iFrance. "
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Aymeric Laporte Childhood kanye namaqiniso angabonakali we-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.